ညီလင်းသစ်: Back to blog...
Posted by ညီလင်းသစ် au 30.10.13
exciting .. ;)
Ready, let's go :))
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ချင်နေပါပြီ...welcome back to blog ! :)
အစ်ကိုညီလင်းသစ် ..ရေ ရန်ကုန်ပြန်ပို့(စ်) လေးဖတ်ဖို့စောင့်နေပါတယ်ရှင်...
အစ်ကို့ရဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့ပို့စ်တွေမှာ ကျနော်တို့မြင်နေကျ အမြင်မျိုး မဟုတ်တာလေးတွေ ဖတ်ရလွန်းလို့ ဒီလိုပိုစ်မျိုးကိုပဲ တကူးတက စောင့်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မြန်လေးတင်ပါဗျာ မျှော်နေတယ်။
အင်း ချဉ်ပေါင်ကြော်ပုံတို.၊ မုန်.ဟင်းခါးပုံတို. နဲ.အတူ တခြားစားစရာပုံတွေ မျှော်နေပါ.မယ်လေ။
“တစ်ခေါက်ဆို ဆိုသလောက် သွားဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာတွေက မနည်းဘူး မဟုတ်လား...၊” ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပါဘဲ။
ကိုညီလင်းတော.မသိဘူး၊ ကျမတို.မိသားစုကတော. ရန်ကုန်ကပြန်လာရင် နောင်တလိုမျိုး တခုမဟုတ်တခု အမြဲခံစားရတယ်။ဟိုနားလေးတော.မသွားလိုက်ရဘူး၊ဟိုဟာလေးတော. မစားခဲ.လိုက်ရဘူး၊ ဟိုလူဒီလူနဲ.တော.မတွေ.ခဲ.ရဘူး စသဖြင်.ပေါ.။
ဓာတ်ပုံတွေ၊ စာတွေ အမြန်တင်ပါတော.ဗျို.။ စောင်.မျှော်လျှက်ပါ ။ ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး ကိုညီလင်းရဲ. မအိမ်သူနဲ.သားကလေး ကျန်းကျန်းမာမာဘဲလားဆိုတာလဲသိချင်ပါတယ်။ ဘာလို.ဆိုတော. အစားမှားတာတို.ဘာတို.ဖြစ်တတ်လို.လေ။
Alright, here we go...! :)
ဟုတ်.. အမြန်ဆုံး ရေးပါ့မယ်နော်၊
ပုံကော၊ စာကော တင်မယ်နော် ညီမ..၊း)
အခုလို စိတ်ဝင်စားတာ သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ကျနော် အမြန်ဆုံး တင်ပါ့မယ်..၊
ဟား... အဲဒါတော့ တူတယ်ဗျို့၊ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီလို ခံစားရ စမြဲပဲ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ပြင်ဆင်သွားသွား၊ ပြန်လာရင် မတွေ့လိုက်ရတာ၊ မစားလိုက်ရတာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကတော့ အမြဲ ပေါ်ပေါ်လာတယ်..။းD
စောင့်နေပါတယ်။ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့ ပုံကောင်းတွေ သေချာရလာမှာပါ။
ရွှေပြည်ကြီးမှာ မြင်ခဲ့ရသမျှ ကြုံခဲ့ရသမျှကို အမြင်စူးစူး အရေးညက်ညက်နဲ့ တင်ဆက်လာမယ့် ပို့စ်ကောင်းတွေကို မြိန်ရှည်ရှက်ရည် ဖတ်ရတော့မှာပေါ့ ကိုညီလင်းရေ...
Waiting the new post.
ထိုင်ခုံမှာခါးပတ်ပတ်လျှက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်းပါ..ကိုညီရေ... :D